Tag: kuvandudza kutengesa | Martech Zone
Tag: kuvandudza kutengesa
Saka shamwari dzangu zhinji vanhu vakuru vekutengesa. Kutaura chokwadi, ini handina kana kumboremekedza hunyanzvi hwavo kusvika ndatanga bhizinesi rangu ndikarovera ipapo. Ini ndaive nevateereri vazhinji, hukama hwakasimba nemakambani aindiremekedza, uye nebasa rakakura ravaida. Hapana chimwe cheizvozvo chakakoshesa wechipiri ini ndakapinda nepasuo kuti ndigare pasi pamusangano wekutengesa! Hapana chandakaita kuzvigadzirira uye munguva pfupi ndakawana